Mpizara voatokana: ny fomba hisafidianana ny tsara ho an'ny tranga manokana | Avy amin'ny Linux
Serivisy natokana: ny fomba hisafidianana ny tsara ho an'ny tranga manokana
Isaac | | hafa
Ny Internet, araka ny ahalalanao azy, miaraka amin'ireo pejin-tranonkala sy serivisy rehetra ireo dia tsy zavatra ambany. Zavatra azo tsapain-tanana izy io ary hita io host at server. Ary, toy ny tsy hamelanao zavatra sarobidy na aiza na aiza, dia tsy tokony tsy raharahianao ny toerana hampiantranoanao ny tranokalanao. Noho izany, tokony ho fantatrao ireo mpizara voatokana tsara indrindra any.
Betsaka ireo mpanome serivisy natokana, miaraka amina serivisy marobe sy sarany samihafa. Mampanano sarotra ny safidy izany, ka tokony ho fantatrao daholo ny pitsopitsony mba hahafahanao misafidy ny tsara indrindra ho an'ny tranga manokana misy anao ary amin'izany no tena hahasoa anao ...
1 Inona ireo mpizara voatokana?
1.1 Fampiantrano natokana vs mpizara voatokana
1.2 Ny maha-zava-dehibe ny tetezamita nomerika
1.3 Tombony sy fatiantoka
1.3.1 Ka tokony handray mpizara zaraina ve aho?
2 Ahoana ny fomba hisafidianana mpizara voatokana
2.1 Ny maha-zava-dehibe ny GDPR
Inona ireo mpizara voatokana?
Rehefa misafidy fampiantranoana, na fampiantranoana, rehefa mila toerana ao anaty rahona ianao handefasana pejy / serivisy iray, ny iray amin'ireo fanontaniana matetika dia ny mahafantatra hoe inona izany mpizara voatokana (mpizara voatokana). Ny fananana an'io mazava io dia zava-dehibe amin'ny fisafidianana ny serivisy fampiantranoana orinasa tsara indrindra, mamela ny exclusivity sy ny fifehezana tsara kokoa ny habaka tranokalanao.
Mpizara natokana dia a safidy tena feno sy manokana ho an'ny olona, ​​mpiasa tsy miankina ary orinasa mitady fampiantranoana tranonkala. Noho izany, izy ireo dia nanjary iray amin'ireo fomba maoderina takiana indrindra ankehitriny.
Toa mitovy amin'ny a izany mpizara nozaraina, nefa tsia. Ao amin'ny mpizara nozaraina, ny mpizara iray dia zaraina ho an'ny mpanjifa maromaro. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ireo tranokala mpanjifa rehetra dia mampiasa loharano fitaovana mitovy amin'ny solo-sainanao.
Ireo mpizara tranonkala zaraina dia mety ho an'ny tranokala sasany mihinana loharanom-pahalalana vitsivitsy ary kely izy ireo. Fa raha mitombo izy ireo na lehibe loatra, ny safidy tsara indrindra dia ny fananana mpizara tranonkala voatokana. Izany hoe ilay iray natokana ho an'ny kaonty iray fotsiny ny mpizara na ny milina, afaka mankafy ny loharano rehetra.
Amin'ny fampiasana simile an-tanàn-dehibe, ny serivera natokana dia ho toy ny manofa trano ho anao, fa ny mpizara iray kosa dia ho toy ny fananana trano iraisana.
Amin'izao fotoana izao, ny fahasamihafana misy eo amin'ny mpizara zaraina sy natokana dia efa simba, nanomboka tamin'ny fisehoan'ny VPS (Virtual Private Server), ny zavatra atao dia ny fampiasana mpizara mitovy ho an'ny mpanjifa rehetra, toy ny iray nozaraina, fa miaraka amin'ny tombony azo amin'ny fanoloran-tena amin'ny fampiantranoana ny tetikasa tsy miankina tsirairay amin'ny milina virtoaly.
Ireo karazana serivisy ireo no be mpampiasa ankehitriny. Azon'izy ireo atao ny mizara foibe angona lehibe hizarana loharanom-pahalalana marobe amin'ireo mpanjifa. Ka samy manana ny azy habaka virtoaly manokana, miaraka amin'ny loharanom-bolany vRAM, vCPU, fitehirizana virtoaly, interface interface virtual, sns. Izany dia ahafahana manitatra ny serivisy sy mahazo loharano fanampiny raha ilaina izany, tsy mila manova ny mpizara ara-batana.
Ho fanampin'izay, manolotra iray hafa izy ireo tombony fanampiny, ary raha misy zavatra mitranga amin'ny iray amin'ireo VPS ireo dia tsy hisy fiantraikany amin'ny ambiny izany. Izany dia noho ny zava-misy, na dia samy mampiasa milina (serivera) mitovy aza ny mpanjifa rehetra, miaraka amin'ny VPS dia zarazaraina ireo loharanom-pahalalana hahazoana mpizara virtoaly maromaro miasa ho toy ny milina mahaleo tena, miaraka amin'ny fizarana loharanon-karena, rafitra miasa, rindrambaiko, sns.
Fampiantrano natokana vs mpizara voatokana
Indraindray, ny mpanjifa sasany dia manana fisalasalana raha mitovy izany fampiantranoana natokana sy mpizara natokana. Raha ny marina, rehefa atolotra anao ny iray na ny serivisy hafa, dia zavatra mitovy no ampiasain'izy ireo matetika, dia ampiasaina amin'ny fomba mitovy.
Na dia eny henjana izahay, ny mpizara voatokana dia masinina mifandray amin'ny Internet izay afaka manome karazana serivisy ho an'ny mpanjifany. Fa kosa, ny fampiantranoana dia manondro manokana ny fampiantranoana tranonkala ao anaty mpizara. Araka ny efa nolazaiko teo aloha, ao anatin'io mpizara io dia misy fampiantranoana maromaro azo zahana raha zaraina izany, na raha atokana amin'ny alàlan'ny VPS.
Serivisy sasantsasany amin'izao fotoana izao Cloud Computing Tena malalaka izy ireo, ary afaka manolotra fampiantranoana ary koa serivisy hafa: computing, mijanona hampiasa rafitra sy fampiharana miasa sns. (jereo IaaS, SaaS, PaaS, ...).
Ny maha-zava-dehibe ny tetezamita nomerika
Talohan'ny nahatongavan'ny Areti-mifindra SARS-CoV-2, ny fanovana nomerika an'ireo orinasa dia tena zava-dehibe. Saingy aorian'ny Covid-19 dia saika tsy safidy intsony io fa adidy. Ny fametrahana teknolojia vaovao eo am-panaovana ny asanao dia afaka mampihena ny vidiny sy manatsara ny tombom-barotra.
Ary iray amin'ireo dingana voalohany hanombohana an'io fanovana io amin'ny orinasanao mahaleo tena, na amin'ny SME-nao, ny famoronana tranokala ary mahita trano hipetrahana ho azy. Izay fotsiny manomboka hanatratra ireo olona rehetra tsy tratra ianao ankehitriny ny serivisinao na ny vokatrao. Na noho izy ireo lavitra toerana, na satria tsy afaka mandeha ara-batana amin'ny toerana misy anao noho ny famerana.
Tombontsoa hafa mandalo ity tetezamita ity:
Afaka mahazo bebe kokoa ianao data sy statistika momba ireo mety ho mpanjifanao. Izany dia hahafahanao hahafantatra bebe kokoa izay ilain'izy ireo, handray fanapahan-kevitra tsara kokoa, na amin'ny fomba fanatsarana ny drafi-barotrao.
Digitization koa manamora ny fandaminana an'ny orinasa. Hahafahanao mitantana ny orinasanao an-tserasera amin'ny alàlan'ny fitaovana rindrambaiko marobe izay mandeha ho azy ny fizotrany maro, toy ny sehatra e-varotra, fampiharana miaraka
Mifanaraka tsara amin'ny fanovana, misaotra ny fanangonana tahiry amin'ny fotoana tena izy. Io fahaiza-mamaly mialoha io dia tena ilaina amin'ny fotoanan'ny tsy fahatokisana na toe-javatra toa an'io krizy io.
Mamela ny fanapariaham-pahefana asa, ary manamora teleworking.
Indraindray manalavitra ny fandidiana avy any an-toerana, Ka ny tranokala iray dia afaka mamonjy anao ny hofan'ny fananganana, faktioran-jiro, rano, fanaka sns. Misy fiatraikany amin'ny vidiny ihany koa izany, izay hanjary hifaninana bebe kokoa amin'ny tsy fampidirana ireo fandaniana amin'ny faritry ny tombom-barotra.
Fanatrarana bebe kokoa amin'ny orinasanao. Raha talohan'ny nahatratraranao ny olom-pirenena akaikin'ny orinasanao ihany dia azonao izao tontolo izao.
Hanatsara ny sarin'ny orinasanao izany ary hanana ianao mpanjifa afa-po indrindra misy serivisy.
bebe kokoa hakingana, mampihena ny fizotran'ny birao.
Ny fananana mpizara voatokana dia manana izany tombony sy lesoka, toy ny serivisy rehetra.
Raha milaza isika ny tombony, mitsangana izy ireo:
Exclusiveness: tsy mila mizara enti-manana ianao, natokana ho anao tanteraka ilay masinina. Izany dia manome fahaleovan-tena, fahitsiana ary fampisehoana avo kokoa.
Fanaraha-maso: azonao atao ny mitantana ny mpizara araka ny itiavanao azy.
fiarovana: Raha tsy mizara loharano amin'ny tetikasa hafa ianao dia tsy hiharan'ny fandrahonana sasany.
fikarakarana: Ny mpizara voatokana dia manana fikojakojana tsotra kokoa, satria ny serivera, na ny VPS, dia somary sarotra kokoa.
manovaova: marobe kokoa izy io, afaka manokana ny habaka sy loharano amin'izay tena ilainao, miaraka amina sehatra maro sy mpitantana atiny. Azonao atao koa ny misafidy ny rafitry ny mpizara miaraka amin'ny fahalalahana lehibe kokoa ...
Ary koa ny fatiantoka:
vidiny: ny fanoloran-tena dia lafo kokoa noho ny fampiantranoana na mpizara VPS. Na izany aza, dia mendrika izany noho ny tombontsoa azon'izy ireo.
Fahasarotana: raha mitantana mpizara iray feno ianao dia tokony hanana fiofanana sahaza. Na dia maro aza ny serivisy rahona matetika no manao ny asa fikojakojana sy fitantanana ho anao.
Ka tokony handray mpizara zaraina ve aho?
Amin'ny ankapobeny, raha tranonkala kely na bilaogy kely fotsiny no tadiavinao, tsy misy izany dia tsy mila izany ianao manakarama mpizara voatokana. Etsy ankilany, ny lozisialy natokana no safidy tsara indrindra amin'ny tranokala serivisy, magazay an-tserasera, ary sehatra hafa manana tanjaka lehibe (avo lenta, isan'ny fitsidihana avo na fifamoivoizana angon-drakitra avo lenta, ...).
Mety ihany koa ho an'ireo tetikasa izay mety hanomboka kely, nefa misy vinavina hitombo be. Tsy hiteraka fameperana loharano maharitra izany.
Ahoana ny fomba hisafidianana mpizara voatokana
Ny mpizara iray dia tsy inona fa a solosaina avo lenta. Noho izany, rehefa misafidy mpizara voatokana ianao dia tokony hijery ireo lafiny teknika mitovy amin'ny rehefa mividy PC:
Unité centrale- Matetika ny servers dia manana microprocessors marobe, izany hoe ati-doha marobe. Ny fahombiazana dia miankina amin'izy ireo rehefa mihazakazaka ny rafitra fiasa sy ny lozisialy izay atolotra amin'ny mpizara. Noho izany, zava-dehibe ny fahombiazan'izy ireo. Amin'ny tranga VPS, dia ho vCPU, izany hoe CPU virtoaly.
Fahatsiarovana RAM: ny fahatsiarovana lehibe dia zava-dehibe ihany koa, ny hakingana izay ihetsehan'ny zava-drehetra dia miankina aminy ihany koa. Miaraka amin'ny fahatsiarovana miadana, latency avo, na fahaiza ambany, ny CPU dia tsy afaka miasa zava-mahatalanjona. Ny vola ilaina dia miankina betsaka amin'ny tranga manokana, satria tsy ny mpanjifa rehetra no mila zavatra mitovy.
fitehirizana: ny kapila mafy dia ampahany iray hafa ilaina. Ny mpizara sasany natokana dia mbola mampiasa kapila mateza (HDD), izay hiadana kokoa, nefa mazàna manana tanjaka ambony. Ny sasany kosa nanomboka nampiasa kapila mafy (SSD), miaraka amin'ny hafainganam-pandeha avo kokoa. Amin'ny ankapobeny dia tsy mila miahiahy momba ny fahamendrehana ianao amin'ny lafiny rehetra, satria mampiasa rafitra RAID izy ireo. Ireo rafitra miverimberina ireo dia midika fa raha tsy mahomby ny kapila dia azo soloina tsy misy fatiantoka data.
Rafitra fandidiana: mety Windows Server, na fizarana GNU / Linux sasany. Amin'ny fotoana tsy fahita firy ianao dia afaka mahita rafitra hafa toa an'ny UNIX, toy ny Solaris, * BSD, sns. Noho ny fahamendrehany, ny filaminana ary ny fitoniany, Linux dia nanjaka tamin'ny maro, ankoatry ny fananana fikojakojana kely sy filàna fitantanana.
Famindrana angona- Manondro ny habetsaky ny angona azo afindra amin'ny tsipika tambajotran'ireo mpizara ireo. Izy io dia zavatra izay feran'ny mpamatsy matetika amin'ny serivisy sasany, na manana tsy voafetra amin'ny hafa lafo vidy kokoa. Na izany na tsy izany dia tokony ampifanarahana amin'ny zavatra ilainao amin'ny fitsidihana na famindrana hataonao io.
Fanontaniana hafa izay mety hahaliana anao dia ilay karazana tontonana fanaraha-maso ananany, na fitaovana hafa azon'izy ireo omena, toy ny fisoratana anarana amin'ny domaine, serivisy mailaka, tahiry, sns.
Ny maha-zava-dehibe ny GDPR
Azo antoka fa efa naheno ianao GAIA-X, tetikasa eropeana iray mahaliana ho an'ny sehatra rahona izay mahafeno ny fitakian'ny Lalàna fiarovana ny angona eropeana. Zava-dehibe ny fanajana ny zon'ny tsiambaratelo ary hitazomana ny angona any amin'ny faritany eropeana (na raha tsy mahomby izany, dia manaraka ny GDPR).
Raha ilaina izany amin'ny tranga isam-batan'olona dia vao mainka izany rehefa mikarakara data saro-pady amin'ny orinasa iray, na ny mpanjifany. Ny olana dia sarotra ny mahita serivisy mifanaraka amin'ny lalàna sy mifaninana. Vao mainka aza jerena ny fitaomana lehibe sy ny herin'ny antsoina hoe GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple, ary Microsoft).
Mitadiava lozisialy natokana hampiantranoana ivon-toerana ao Eropa, ary tsy mora ny mifaninana. Ohatra iray dia Ikoula., Manampahaizana manokana amin'ny fampiantranoana tranonkala, mpizara voatokana, ary computing cloud. Ho fanampin'izay, manana traikefa lehibe hatramin'ny 1998 izy ireo.
Ireo ivon-kevitrao any Frantsa izy ireo, amin'ny toerana roa ao amin'ny Reims sy Eppes, ary koa any Holland sy Alemana (ary koa USA sy Singapore, fa afaka misafidy raha tianao). Ivotoerana izay fananana, fa tsy tetika fanofana toa ny mitranga amin'ny serivisy hafa. Ankoatr'izay, manana sampana any Netherlands sy Espana izy. Ho fanampin'izay, manana serivisy fanampiana 24/7 misy fiteny maro azonao izy ireo.
Entre Serivisy Ikoula mijoro:
elektronika namany Sary matihanina ary web domains ny
SSL / TLS mari-pahaizana ho an'ny filaminana
Fifanarahana tsotra ho an'ny fitantanana
Ankoatr'izay, ho tianao amin'ny toetra hafa io toy ny:
Ampiasao open source sy tetikasa maimaim-poana toa an'i Kubernetes.
ho mamaly ny tontolo iainana, fanajana bebe kokoa amin'ny tontolo iainana amin'ny alàlan'ny fampiasana angovo azo havaozina 100% ao amin'ireo ivon-draketan'izy ireo (tadidio fa mihinana angovo be dia be ny ivon-tahiry, ary tena ilaina izany).
Manohana ny fanombohana izy ireo, izay mety hamporisika anao tsara raha vao manomboka ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » hafa » Serivisy natokana: ny fomba hisafidianana ny tsara ho an'ny tranga manokana
MX-19.3: Nohavaozina ny MX Linux, DistroWatch laharana 1
CrowdSec: tetikasa open source fiaraha-miasa cybersecurity ho an'ny Linux